စကျတငျဘာ 13, 2018 – Healthy Life Journal
မေး ။ နှင်းခူရှိတဲ့ အရေပြားကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းသင့်ပါသလဲရှင့်။ လတ်လတ်ခင်၊ တာမွေ။ ပါမောက္ခဒေါ်မြတ်စန္ဒာကျော် (အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ နေထိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က သန့်ရှင်းရမယ်။ ခြောက်သွေ့ရမယ်။ အရေပြား ခြောက်သွေ့တာကို ကာကွယ်ရမယ်။...
ငါးရိုးစူးနေလို့ . . .
မေး ။ ညီမ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အသက် ၂၃နှစ်ပါ။ ယောက်ျားလေးပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ရက်လောက်က ညနေဘက်ထမင်းစားရင်း ငါးရိုးစူးသွားပါတယ်။ လည်ချောင်းထဲမှာ မျက်တတ်၊ မျက်တတ်နဲ့ အခုထိ မပျောက်သေးလို့ပါ။ သံပရာသီးအရည်ကို သောက်သောက်ပေးပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ citric ကငါးရိုးကို ကြေစေတယ်လို့ကြားဖူးလို့ပါ။...
ရှင်းပြပါဆရာ . . . (၇) ဘေလုံးလား၊ စိတ်ကျရောဂါလား
ဒေါက်တာအုန်းကျော်(စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) အရှေ့တီမောနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရစ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ ပရဟိတစိတ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ လုပ်အားပေး စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်အဖြစ် စာရေးသူ လိုက်ပါသွားတယ်။ စာရေးသူနဲ့အတူ လူနာလိုက်လံ စစ်ဆေးတဲ့ တီမောနိုင်ငံသားသူနာပြုတွေကို အခါ အခွင့်ကြုံသလို ပညာပေးရပါတယ်။ စိတ္တဇစိတ်ကျ...
ရှင်းပြပါဆရာ . . . (၆) စိတ်ရောဂါက ကူးစက်တတ်သလား
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) စာရေးသူ ကုသခဲ့တဲ့ လူနာတွေ၊ လူနာရဲ့မိသားစုဝင်တွေ၊ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေ၊ စိတ်ကျန်းမာရေး သင်တန်းသားတွေနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက သူတို့သိချင်တဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို မေးမြန်းလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်စဉ်းစားပြီး “ရှင်းပြပါဆရာ”ဆောင်းပါးစဉ်ကို ဆက်လက်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်မှာ “စိတ်ရောဂါက ကူးစက်တတ်သလား”လို့...
အာခေါင်တွေ ခြောက်လွန်းလို့ပါ . . .
မေး။ ။ ညဘက်ဆို အာခေါင်တွေ အရမ်းခြောက်တာ။ ရေဘူးကိုအနားမှာထားပြီးအိပ်ရပါတယ်။ တစ်ခါတ လေသောက်ရတာ ရေတစ်လီတာကျော်တယ်။ ဆီးချိုရှိလားစစ်တော့လည်း မရှိဘူးတဲ့။ ဆေးခန်းသွားရမှာလည်းကြောက်လို့ပါ။ အသက်ကတော့ ၄၉ နှစ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅၁ ပေါင်ရှိပါတယ်။ Daw Ni Ni Aye...
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ဆံပင်ညှပ်ဆရာမ ကေလီအော်လ်ဆင်က အသည်းကွဲနေတဲ့ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ဆယ်ကျော်သက်မလေးရဲ့ မပြင်မဆင်ညစ်ပတ်နေတဲ့ဆံပင်ကို နှစ်ရက်တိုင်တိုင် ရှင်းလင်းကာ ပုံစံအသစ်ပြင်ပေးလိုက်တာကြောင့် လူတွေရဲ့ အားပေးမှုရရှိနေပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်မလေးဟာ အသည်းကွဲပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတာ နှစ်ချီရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အပေါ့အပါး...
လုပ်ငန်းခွင်က ရလာမယ့် စိတ်ဖိစီးမှုကို ဘယ်လိုရှောင်လွှဲသင့်ပါသလဲ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ လုပ်ငန်းခွင်က ရရှိလာနိုင်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုအား လုံးကိုတော့ မရှောင်လွှဲနိုင်ပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုကို ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားမယ့်အစား စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးမထိခိုက်အောင်၊ စိတ်ဓာတ်မကျအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုခံစားခဲ့ရရင် စိတ်ဖိစီးမှုကို တွန်းလှန်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ပထမအချက်အနေနဲ့...
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း မေး။ ။ မျက်စိထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းအကြောင်း အနည်းငယ်သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ။ ။ မျက်စိမှာမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာ (Trauma) ရလာပြီဆိုရင် ပထမဆုံး မျက်ခွံ(Eyelid)ကို ထိခိုက် မယ်။ အဲဒီအခါ သွေးထွက်လာမယ်။ မျက်ခွံကို သွေးထွက်တာက စိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။ မျက်ခွံကို ပြန်ချုပ် လိုက်ရင်...